Home Somali News Somaliland: Wasiir Warancade Oo Burco Kula Kulmay Odayaasha Beelaha Baliga Diiriye Guuleed
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Md.Cali Maxamed Waran-cadde, ayaa kulan magaalada Burco kula yeeshay Odey dhaqameedyo ka soo kala jeeda beelaha walaalaha ah ee dhawaan dirirta muranka dhuleed ahi ku dhex martay Baliga Diiriye Guuleed.
Waxaana kulankan wasiirka ku wahelinaayey wasiiru dawlaha Maaliyada, guddoomiyaha gobalka Togdheer, Odeyada ka soo kala jeeda Labada beelood ee dirirtu dhex martay iyo xildhibaano ka tirsan Golaha Guurtida.
Guddoomiyaha gobalka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo ugu horeyn halkaas ka hadlay, ayaa sheegay in arrinta dhex-dhexaadinta Labada beelood ee ay dirirtu dhex martay ay marayso meel wanaagsan, waxaana uu rajo fiican ka muujiyey in si wanaagsan u so dhammaan doonto.
“Arrintaasi meel wanaagsan ayey maraysaa wasiir, waxaana ay u baahan yihiin Labadaa dhinac ee walaalaha ahi oo dhulka haddii aad aragto waa illaa 10Km Labada magaalo ee dhisan inta ay isu jiraan, in dee waxii waano iyo talo ahba aad siiso waa lagaa sugaa wasiir.”.Ayuu yidhi Md.Maxamed Muuse Diiriye.
Wasiiru dawlaha wasaarada Maaliyada Somaliland Axmed Saxardiid Cismaan(Caddaani) oo halkaas ka hadlay, ayaa ugu horeyn si aada ugu mahad naqay xildhibaanada golaha Guurtida ee ku hawlana heshiisiinta iyo dhex-dhexaadinta Labada beelood, waxaana uu ku ammaanay doorka muuqda ee mar walba ay ka qaataan sidii loo soo afjari lahaa colaadaha ka abuurma guud ahaan dalka, isaga oo sida oo kalena ugu baaqay gudida matalaysa dhincayada dirirtu dhexmartay ee wada-hadalku u socdo in ay ku dedaalaan sidii ay xal waara uga soo saari lahaayeen arrintaas taagan, waxaan uu tibaaxay in xalka ay soo saaraan uu cid walba dan u noqon doono.
“Ugu horeyn waxaan u mahad naqayaa Guurtida xildhibaanada ah ee halkan fadhida oo runtii hawlaha dalku marka ay adkaadaan lagu soo ciiro, laguna badbaado mar walba aad ayaan ugu mahad naqayaa. Idinku dadka aad matashaan dan ayaa ay u tahay idinkana danbay idiin tahay oo waa aynu wada ognahayoo halkaas oo qudha maahee meelo badan oo kale ayaad ku wada nooshihiin, waar dee sida aad tan ugu wada nooshihiin ayaad kuwaana ugu wada noolaanaysaan, hawli idin kuma yara Illaahay waxaan idiin ka baryeyaa in uu idin la qabto, idinkuna aad aamintaan.”.Ayuu yidhi Axmed Saxardiid Caddaani.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Md.Cali Maxamed Waran-cadde oo isna halkaas ka hadlay, ayaa sheegay in ay qiimo badan leedahay haddii uu mid ka mid ah beelaha ishaya uu tanaasul muujin lahaa, waxa kale oo uu uga digay in ay maqlaan siyaasiyiin uu sheegay in ay yihiin afku xoogleyaal oo magaalooyinka jooga kuwaasi oo uu tibaaxay in aanay u wadin wax dan ah, iyagana looga baahan yahay in ay si walaal tinimo ah ay danahooda uga tashadaan.
“Mida horta aan idiin ka digayaa waxa weeye in aan siyaasad nin magaalo jooga oo aan camal hayn oo afku xoogle ah oo aan idiin furi doonin in aanu idiin rarin, in aad hoosta isaga xidhataan Labadiina qoys ee wax wadaaga arrintaa intiina loo soocay, bulshada inteedii kalena waa ay idin sugaysaa, haddii qolo dabciso xadhiga ceeb maaha, in boggiina burcad isu mariyaan oo isu kiin soo dhaweeyaan oo marba ay meel idin ka tusaan ayey idiin la joogaan Guurtidu, inta arrintaasi dhammaanaysana waa ay idin la joogayaan, idin kuna kuwii xadhiga dabciya ee xaga wanaaga ka eega in aad noqotaan.”.Ayuu yidhi Md.Cali Waran-cadde.
Maxaa Sababay in Djibouti soo jiidato quwadaha dunida?
Xukuumadda Shiinaha, ayaa waxay dhowaan keentay Jabuuti ilaa 700 askari si ay u difaacato danaheeda xagga saliida oo ay ku leedahay dalka South Sudan. Waxaa sidoo kale ka go’an in ay difaacdo 200 biliyan ee Dollar ee gacasiga ah oo ay la leedahay qaaradda Afrika.
Waxaa sidoo kale saldhigan shiinaha ka faa’iideysanaya shaqaalaha shiinaha ah ee ka shaqeeya goboladda Afrika iyo Bariga Dhexe.
Baliga Diiriye Guuleed